Liverpool oo Khatar ugu jirta inay habeen dambe wayso Daafaceeda Birta ah ee Virgil van Dijk – Gool FM
(England) 29 Jan 2019. Virgil van Dijk ayaa la dagaalaya waqtiga si uu taam ugu noqdo kulanka habeen dambe ay Liverpool ku wajaheyso Leicester City tartanka Premier League.
Daafaca reer Holland ayaa ka soo muuqday dhammaan 23-ka kulan ay Reds horyaalka ciyaartay kal ciyaareedkan.
Yeelkeede, Van Dijk ayaan dib ugu soo laaban tababarka buuxa ee kooxda kaddib markii la sheegay inuu xanuunsaday intii lagu guda jiray tababarkii ay ku qaadanayeen Dubai sida uu warinayo Liverpool Echo.
Van Dijk ayaa la siin doonaa fursad kasta si uu u caddeeyo inuu taam yahay ka hor kulanka habeen dambe ay mininkooda ku marti qaadayaan Foxes maadaama Liverpool ay aad u dooneyso inay hesho daafaceeda xilli ay eeganayaan inay horey u dhaqaajiyaan tartankooda Horyaalka.
Manchester City ayaa hal dhibic oo qura u jirsan doona kooxda Jurgen Klopp haddii ay caawa ka adkaadaan kooxda Newcastle United.
Labo Beri oo Qura ayaa ka harsan Suuqa kala iibsiga.....(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay ee Saakay laga qoray Suuqa)
SAWIRRO: Garsoorayaal Soomaaliyeed oo Siminaar loogu furay Muqdisho